» बुद्ध लामा घाईते भएका हुन् ?
बुद्ध लामा घाईते भएका हुन् ?
१३ मंसिर २०७७, शनिबार २०:२९
मकवानपुर, १३ मंसिर । विश्व प्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’ मा गायक बुद्ध लामा र कोरियोग्राफर केबिका खत्री चर्चित जोडी हुन् । तर शुक्रबार यो जोडीलाई निक्कै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो । तहल्का मच्चाउने नाच सुरु गरेको यस जोडीको प्रस्तुति बिचमै रोकियो । कारण थियो गायक बुद्ध लामाको अस्वस्थता । के बुद्ध लामा घाईते भएकै हुन् ? उनलाई शरिरमा चोट लागेको छ कि ? उनी धेरै नै घाईते पो छन् कि ? यदि बुद्ध घाईते नभएको भए उक्त प्रस्तुतिलाई किन फेरि रिसुट गरिएन ? अहिले दर्शकहरुको मनमा यस्तै प्रश्नहरु उठेका छन् । वास्तवमा बुद्धलाई चोट लागेकै हो त ? यस विषयमा दर्शकहरु अन्यौलमा छन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–
शुक्रबारको प्रस्तुति दिने क्रममा बुद्ध सुरुमा नै केही अस्वस्थ जस्तो देखिन्थे किनभने उनको सदाझैँ हँसिलो मुहार देखिएको थिएन । तर जसै नृत्य सुरु भयो तब यो जोडीको तारिफ निर्णायकहरुले पनि गर्न थाले । उनीहरुले आशा भोष्लेको ‘म प्यार बेचिदिन्छु’ बोलको गीतमा नृत्य गरेका थिए । ओपन स्टाईलको यो नृत्य सुचारु हुँदा हुँदै बुद्धले काँधको दुखाईका कारण केही स्टेपहरु गर्न सकेनन् । बुद्ध दुखाईका कारण रोकिएपछि केबिका पनि रोकिए । त्यसपछि स्टेजको लाईट अफ गरियो । त्यसबिचमा सुटिङ स्थलमा के के भयो त्यस बारेमा दर्शकहरु अनभिज्ञ छन् । यसरी नृत्य रोकिएपछि बुद्ध र केबिकाको नृत्यमा निर्णायक रेनेशा राईले आफ्नो धारणा राखिन् । बुद्धको दुखाई, केबिका र बुद्धको लगनशिलता वा सुटिङका दौरानको अन्य कुराले गर्दा पनि हुनसक्छ, रेनेशाको आँखा टिलपिलाएका थिए । उनी मनमनै भक्कानिँदै कमेन्ट गर्दैथिईन् । केबिकाले पनि आफ्नो पिडालाई लुकाउँदै गरेको र भक्कानिएको प्रष्ट देखिन्थ्यो । तसर्थ सेटमा बाँकी कुरा के भयो भन्ने बारेमा सहभागी र निर्णायक सहित आयोजक टिमलाई मात्र थाहा छ । निर्णायक रेनेशाले भक्कानिदै बुद्धको जित्ने चाहाना र लगनशिलता आफुले देखिरहेको बताए । तर आफैलाई चोट पुराएर प्रस्तुति दिन नहुने उनले बताईन् ।
बुद्धले आफैआफैलाई चोट पुराउन खोजेको भन्दै त्यस्तो नगर्न उनले सुझाव दिईन् । बुद्ध लामा अहिले नै विजयी भइसकेको भन्दै हरेक मेहनतको तारिफ गरिन् । बुद्धको मेहनत देखेर खुशी लागेता पनि आफैलाई चोट दिएको देख्दा सारै दुःख लाग्ने गरेको उनले बताईन् । निर्णायक दिलिप रायमाझीले बुद्धिका जोडीले जति नृत्य गर्यो त्यो सबै राम्रो भएको बताए । नृत्यको सुरुदेखिनै निक्कै राम्रो भएको भन्दै कुनै पनि मुभ्सहरु नदोहोरिएको बताए । यदि नृत्य बिचमा नरोकिएको भए निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ ओभिएसन दिन सक्ने अवस्था भएको उनले बताए । अरु प्रतियोगीहरुको पनि गल्तीहरु भएको भन्दै उनले प्रस्तुतिका क्रममा यस्तो समस्याहरु आउनु स्वभाविक भएको बताए । त्यस्तै निर्णायक गौरी मल्लले केबिकाको कोरियोग्राफी र उनीहरुको प्रस्तुतिको तारिफ गरिन् । उनले पनि दुबै निर्णायकको कुरामा सहमति जनाउँदै स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिईन् ।
बुद्ध र केबिकालाई निर्णायक रेनेशाले ८ अंक, गौरीले ७ अंक र दिलिपले ९ अंक गरी जम्मा २४ अंक दिएका थिए । भोटिङ अपिलका क्रममा बुद्धले आफुलाई परेको चोटबारे खुलेर बताएका थिए । उनले शुक्रबारको प्रस्तुतिका लागि निर्णायकहरुसँग माफी माग्दै गत साताको प्रस्तुतिमा आफुलाई काँधमा चोट लागेको बताए । चोटका कारण आफुले प्रस्तुति दिन नसकेको र पहिलो पटक यस्तो भएको भन्दै उनले आफ्नो मन दुखेको बताए । निर्णायकहरुले बुद्ध र केबिकालाई हौसला दिँदै चिन्ता नगर्न सुझाव दिए । प्रतियोगितामा भाग लिएका सबै स्टार र कोरियोग्राफरहरुको जोडीहरुमध्ये सर्वाधिक केमेष्ट्रि मिलेको जोडीका रुपमा बुद्ध लामा र केबिका खत्रीको जोडी चर्चामा छ । स्टेजमा बुद्धिका जोडीका नामले परिचित यो जोडी शोमा मात्र नभई शोबाहिर पनि उत्तिकै चर्चामा छन् । उनीहरुको जोडीलाई दर्शकहरुले केमेष्ट्रि मिलेको जोडीका रुपमा मन पराएका छन् । बुद्ध र केबिकाले पहिलोदेखि छैटौँ हप्तासम्म समान २६–२६ अंक, सातौँ हप्ता २८ अंक, आठौँ हप्ता २६ अंक, नवौँ हप्ताको शुक्रबार २७ र शनिबार ३० अंक तथा दशौँ हप्ताको शुक्रबार २४ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले दशौँ हप्ताको पहिलो दिन सकिँदा जम्मा २९१ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले पहिलो हप्ता फ्री स्टाईल, दोस्रो हप्ता तामाङ सेलो, तेस्रो हप्ता कन्टेम्प्ररी, चौथो हप्ता ओपन स्टाईल र पाँचौँ हप्ता हाउस डान्स गरको थिए । त्यस्तै छैटौँ हप्ता ओपन स्टाईल, सातौँ हप्ता लिरिकल कन्टेम्प्ररी, आठौँ हप्टा ओपन स्टाईल, नवौँ हप्ता साल्सा र साम्बा तथा ओपन स्टाईल र दशौँ हप्ताको शुक्रबार ओपन स्टाईल डान्स गरेका थिए । उनीहरुले नवौँ हप्ताको पहिलो दिन पहिलो पटक पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । उनीहरुले दुई पटक बटम लाईनको सामना गरेका छन् ।